Astaanta Wadnaha “heart” - Land Of Punt
Astaanta Wadnaha “heart”
Astaanta Wadnaha waxaa looyaqaan “Silphium” waana kalmad ka timid afka latiinka oo laga soo xigtay imborodoriyadii Roomanka. Astaanta wadna casaanka ah waxaa loo nisbeeya oo qaata dadka muxubada iyo jacaylka isuhaya ee aan kala maarmin. Waa astaan dunida oo dhan laga yaqaan iskusi loofahmo nuxurka kujira. Astaanta wadna suuqeedu waa xaamil oo balaayin doolar ayaa lagukala macaasha waxaana intabdan lagu xardhaa kaadhadhka, waraaqa laysweydaarsado iyo alaadaha casriga ee iminka la isticmaalo ee jacaylka utaagan.
Lakinse, intaas kuma eega calaamada wadnaha cilmigeedu. Asaanta wadnaha waxaa laga yaqaanay oo ay qayb libaax kaga jirtay nolosha bulshada roomanka. Waxay ahayd calaamad bulshadu wadatiqiin muhiimna u lahayd roomanka; astaanta wadnaha waxay qaadhsiyeen heer ay caabudan waxayna ku dhigteen oo ku xuseen lacagta birta ka samaysan, xataa shaanbada dawlada roomanka ayaa wadne ka samaysmayn. Astaanta wadnaha waxaa lagasoo xigtay geed roomanku uyaaqneen “Silphium” caleenta Silphiumka ayaa lahayd taswiirta wadnaha waxaana la cunijiray caleenta geedka wakhtiyada xafladaha siiba fiidka intaan xafladaha waa weyn ee ay caanka ku ahaayen bilaabmin. Geedka Silpiumka ayaa laga aminsanaa inuu leeyahay maado joojisa dhalmada, lamaanaha cuna geedka ayaan waxba dhalayn inta uu jidhkooda ku jiro Silphiumku.
Sifaaas ayuu tarikhda kusoo galay taswiirta wadnaha ee aynu naqaan oo Roomankii baa cunijiray si’ay isaga ilaaliyaan dhalmo aan la qorshaysnayn. Markay sidaa tahay, waxaa meesha ka muuqata in muxubada laba dhinac oo iskasoo horjeeda laga kala taagan yahay wakhtigaa roomanka iyo dadka isticmaala samankan. Jacaylka roomanku wadeen wuxuu ahaa mid samays ah oo kusalaysan nafta oo loo raaxeeyo loona maro sifo sax ahayn oo dhiirgalinaya guurka xaaranta ah. Dhinacakale ee nool wakhtigan aynu joogno oo ah dad loo sheekeeyo ayaa iyagu sikale u haysta oo aad arkay inay sifo ka duwan sida loogu talogalay usitaan astanta wadna. Kuwa danbe waxay ku matalayaan jacayl dhab ah oo samaawiya oo dhamaystir; jacayl u dhaxaynkara lamaane is wadanool, in’an iyo hooyadii, laba ruux oo isudoonan iyo muxubo diiniya intaas masaladood ayaa isuhuwan oo marmid lagu matalaa astaanta wadnaha.
Astaantan wadnaha waxay ugu jirtay qoomkaa hore halka rabadhka dhalmada joojiya, kiniinka lagula dagaalamo dhalmada iyo irbadaha laysla dhaco ugujiro wakhtigan casriga ah. Qolyihii hore waxay uga danlahaayen sifo ubadka lagula dagaalamayo, qolyaha casriyeeyey arinkaa hore ujeedadeedu kama foga waxayna ku ciyaarayaan maankena oo ay sumaynayaan. Astaan nooca asalkeedu yahay in wajikale loo dhigo oo la casriyeeyo waa arin ka baxsan anshaxa wanaagsan ee biniadamka. Waxaad dareemay in la dhiirigalinayo ficiladii hore ee qoomka room oo wax cadiiya oo looga dhigayo dhalinyarada. Waxaa hubaal ah in jacaylka rasmiga ah iyo muxubada dabiiciga iyo tannay wadaan iska hor imanayaan.
astaanta wadnaha heart Iluminaatiga jacayl maysooniyada symbol of heart ururada hadafka qarsoon leh
Astaanta Dibiga “The Bull”
Rum vs Rome
Ilusion vs invation
Burburka Geeska Afrika Waa badbaadada Soomaalida
Burburka Geesku waa badbaadada Soomaalida Geeska Afrika
Magacyada 12ka bilood
Magacyada maalmaha usbuuca